जाजरकोट पहिरो अपडेटः ९ जनाको शव भेटियो, ‘केही’ अझै बेपत्ता ! (नामसहित)
भीरमा घरबस्ती बनाउने चलनलाई एकीकृत बस्तीमा रुपान्तरण गर्ने कहिले ?
| 2018-08-05 Published
निर्माण सञ्चार, जाजारकोट । जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा (भेरी नगरपालिका–३ ठाटिबजार) मा आइतबार बिहान साँढे सातबजेतिर गएको पहिरोमा परी मर्नेको संख्या ९ पुगेको छ भने अझै केही संख्यामा मानिस हराइरहेको उद्धार कार्यमा संलग्न प्रहरीले बताएको छ ।
पहिरोले २ घर पुरिएका छन् भने आसपासका घरहरु यतिबेला खतराको अवस्थामा छन् ।
पहिरो पन्छाउने क्रममा ९ वटा शव फेला परेको प्रहरीले जनायो । मृत्यु हुनेहरुमा–१३ वर्षीय नरेन्द्र परियार, ११ वर्षीय नवीन परियार, ८ वर्षीय गोविन्द परियार, ८ वर्षीय दर्शक परियारको नाम खुलेको हो ।
पत्रकार महासंघ जाजरकोटका सदस्य तीर्थ बहादुर बोहराकी ८ वर्षीया छोरी नज्मा बोहहराको पनि पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको खुलेको छ ।
त्यस्तै, पहिरोमा परी मृत्यु हुनेमा २५ वर्षीया तिर्सना सितला लुहार, उनकी छोरी ९ वर्षीया भगवती बिक, ६ वर्षीया रञ्जना बिक र ३ वर्षीया मनिषा बिक पनि रहेका छन् ।
३१ वर्षीय लालबहादुर लुहारलाई पहिरोबाट जिउँदै उद्धार गरिएको थियो । उनी तिर्सना सितला लुहारका श्रीमान रहेको प्रहरी बताउँछ ।
झन्डै दर्जन घाइते भएका छन् भने घाइतेहरलाई यतिबेला जाजरकोट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
भेरी नगरपालिका ३–खलंगा ठाँटी नजिककै रहेको डाँडो फुटेर पहिरो गएको हो । पहिरोले स्थानीय तीर्थराज बोहरा र गोपाल सुनारको घर पुरेको छ ।
पहिरो पन्छाउने र उद्धार कार्य जारी छ । स्थानीयका अनुसार घरमा डेरा गरेर बस्ने डेरावालाका बालबालिका घटनामा परेको अनुमान छ ।
३ दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण सुदूर पश्चिम तथा मध्यपश्चि क्षेत्रमा बाढी र पहिरो गइरहेका छन् । पहिरोले विभिन्न ठाउँमा यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
भेरी नगरपालिका मेयर सिपी घर्तीका अनुसार यतिबेला पहिलो खस्न छाडेको छ तैपनि डर भने कायमै छ । स्थानीयबासी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना यतिबेला पहिरो पन्छाउने काममा जुटेका छन् ।
आइतबार, २० साउन, ०७५